Sheekh Soomow oo 'towbad keen' ugu baaqay Goodax kadib arrintii uu sheegay - Caasimada Online
Home Warar Sheekh Soomow oo ‘towbad keen’ ugu baaqay Goodax kadib arrintii uu sheegay
Sheekh Soomow oo ‘towbad keen’ ugu baaqay Goodax kadib arrintii uu sheegay
Muqdisho (Caasimada Online) – Sheekh Cabdiqaadir Soomow oo kamida Culimada magaalada Muqdisho ayaa eedeyn culus u jeediyay Sii-hayaha Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdillaahi Goodax Barre, xili uu ka hadlayey natiijada imtixaankii sanadkan.
Sheekh Soomow ayaa si gaar ah u naqdiyay hadal kasoo yeeray Goodax Barre, isagoona weerar culus ku qaaday, islamarkaana sheegay inuu gef weyn ka galay ardeyda reer Muqdisho.
Natiijadii kasoo baxday imtixaankii dowladda ayuu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin, iyada oo ay ku dhaceen kumanaan ardey ah oo u badan gobolka Banaadir.
Wuxuuna madaxweyne Farmaajo ka dalbaday inuu soo fara-geliyo arrintan, isla markaana dib loo qaado imtixaanka, xili ay fadeexad xoogani dul hooganeyso mas’uuliyiinta wasaaradda waxbarashada kadib shaacintii natiijada imtixaanka.
Soomow ayaa Wasiir Goodax usoo jeediyay in uu towbad keeno, maadama uu sheegay “cilmi baare Computer geliyay axaadiistii Nebiga NKKH uu soo saaray in cimrigiisa iyo tirada axaadiista aysan is keeni karin”, sida uu hadalka u dhigay.
“Wasiir Goodax Jahli buu ku hadlay, Xukun baadil ah buu riday, aqoon la’aan Nabiga NNKH sharaftiisa, qiimahiisa iyo diintiisa aqoonin buu ku hadlay, wuxuu ku dhiiraday Axaadiista Nebiga, waxaana ugu baaqeynaa Alle u towbad keen, jidka aad furtayba waa jid xun” ayuu yiri.
Sheekh Soomow ayaa ku biiray guux xoogan oo looga soo horjeedo wasiir Goodax, kaasi oo ka dhashay natiijadii imtixaanka dugsiyada sarre ee dhawaan ay shaacisay wasaaradu.
Xiisad xoogan ayaa ka dhalatay natiijada imtixaanka dalka ee sanadkan oo ay ku dhaceen 8-kun oo Arday oo kamid ahaa 33-kun ee imtixaanka u fadhiistay, kuwaasi oo u badnaa gobolka Banaadir.